श्रीमानको सधैको टचरले गर्दा म कुमारसंग हिंडे अनुपा (भिडियो) - Nepal Insider
श्रीमानको सधैको टचरले गर्दा म कुमारसंग हिंडे अनुपा (भिडियो)
February 14, 2020 333
कुमार कार्कीसंग भागेर भारतको केरला पुगेकी अनुपाले आफु घर छोडेर हिड्नको कारण बताएकी छन् । उनले आफु बाध्यताले हिड्नु परेको बताएकी छन् । उनले आफु कुमारसंग जान लागेको भनेर पहिले नै आफ्ना श्रीमानलाई भनेको समेत मिडिया सामु खोलेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा कुमारसंग चिनजान भएको र उनीसंग बोलचाल भएको भने अनुपा र कुमारले स्वीकार गरेका छन् । तर आफुहरुको नराम्रो सम्बन्ध नहुँदा पनि कुमारको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानसंग लागि भनेर वे’इज्ज’त गरेर सबैलाई फोन गरेर भनेका कारण बाध्य भएर आफु हिडेको उनले बताएकी हुन् ।
उनीहरु नहिड्दै कुमारको श्रीमतीले फेसवुकमा दुवैजनाको तस्बिर राखेर यिनीहरु भागे भनेर हल्ला म’च्चाएको अनुपाको भनाई छ । कुमारको श्रीमतीले नै आफ्नो श्रीमानलाई कुरा लगाएपछि श्रीमानले आफुलाई या”तना दिन थालेको अनुपाको भनाई छ । कुमारको श्रीमतीले अब तिमीहरु नबोल भनेर भनेका कारण आफुहरु बोल्न समेत छोडिसक्दा पनि बे”इ”ज्जत गर्न नछोडेका कारण आफु बाध्य भएर हिड्न परेको अनुपाको भनाई छ ।
उनले श्रीमानले नेपाल आएर तेरो ज्या”’न लिन्छु भन्दै ध”’म्क्या”’उने र उता कुमारलाई पनि ध”म्क्या”’उने गर्न थालेका थिए । अनुपाको श्रीमानले ध”’म्की दिएका कारण नेपाल गएर आफु सुरक्षित हुन्छु जस्तो नलागेका कारण कसैलाई खबर नगरेको कुमारको भनाई छ । नेपाल आएपछि काठमाडौंमा अनुपा भेट्न पुगेकी थिइन् । विदेशवाट श्रीमानले र नेपालमा कुमारको श्रीमतीले ध””म्की दिने र आफन्त जति सबैलाई फोन गरेर बे”’इ”’ज्जत गरेपछि आफु बस्न नसकेको अनुपाको भनाई छ ।
एकातिर बे”’इ”ज्जत भयो भने अर्कातिर ज्या””न पनि असुरक्षित भएपछि कुमारलाई अब मलाई जसरी पनि लैजाउ नत्र म झु”’ण्डि”एर देह त्याग गर्छु भनेर अनुपाले भनेकी थिइन् । अनुपाको त्यस्तो भनाई पछि कुमार केरला जान राजी भएका थिए । केरालामा आफुले तिहारमा टिका लगाएर भाई मानेका एक जनाको घरमा अनुपाले कुमारलाई पनि लिएर गएकी थिइन् । आफुहरु कात्तिक १ गते मात्र हिडेको भएपनि कुमारको श्रीमतीले असोजको अन्तिम सातानै फेसवुकमा दुई जनाको तस्बिर राखेर बे”’इ”’ज्जत गरेको अनुपाको भनाई छ । कुमारलाई गएको माघ देखि मात्र चिनजान भएको अनुपाको भनाई छ ।
Prev५० हजार धरौटिमा प्रमिला छुटिन् प्रमिला सन्तोषकी श्रीमती प्रमिला, प्रहरी चौकीबाट छुटेर कहाँ गइन ? (भिडियो)
Nextटिपरले कि’चेर दि’लीपको ह’त्या गर्ने क्रसर संचालक सहित तीनजना जे’ल च’लान !
गायक पुस्कल शर्मालाई यस्तो के भयो, स’ति जान्छु भन्दै श्रीमतिले देखाइन यस्तो हर्कत, (हेर्नुस भिडियो सहित)
लाखौं नेपालीहरु काम गरिरहेको देशमा भयावह तरिकाले फैलियो कोरोना भाइरस
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस कुन देशको कति ?
मोडेल कलेजको बसको ठ’क्करबाट २ जनाको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु !
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (39588)